22°31′37″S 41°56′42″W﻿ / ﻿22.526940°S 41.945000°W﻿ / -22.526940; -41.945000
Isam-ponina 100 000 mponina
Faritany Rio de Janeiro
Rio das Ostras dia tanàna ao amin'ny faritany mizaka tenan'i Rio de Janeiro ao amin'ny Brazila.
Ny tanàna dia nijaly ny tontolo iainana avy amin'ny fandotoana ny fiantraikan'ny amoron-dranomasina, renirano sy farihy noho ny tsy fisian'ny fanadiovana fototra sy ny tontolo iainana noho ny tsy ara-dalàna ny asa fiarovana ny tontolo iainana faritra (APAs) noho ny fiarovana sy ny fiarovana ny biotic toetra (biby sy zavamaniry). Ny fitaterana an-tsokosoko avy amin'ny trano sy orinasa an-tsokosoko dia niteraka korontana tany amin'ny tontolo iainana tamin'ny fomba mahery vaika.
Ny kolikoly ara-toe-karenan'ny tanàna dia nanomboka tamin'ny famotsoran-keloka ara-politika sy ara-panjakana tamin'ny 10 aprily 1992, ary nandringana ny ankamaroan'ny Rio das Ostras ka hatramin'izao dia tsy misy karazana fanadiovana fototra. Ny tsy fahampian'ny rano fisotro madio, ny ala, ny fitateram-bahoaka ary ny fitateram-bahoaka dia olana efa tranainy sy marim-pototra ho an'ny tanàna izay nahazo ny trillions amin'ny fampindramam-bola solika.
Amin'izao andro izao, ny ankamaroan'ny morontsirak'i Rio das Ostras dia mijaly noho ny fandrosoan'ny ranomasina, ny erosions ary ny fanorenana tsy miangatra. Ao amin'ny faritra an-drenivohitra, misy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny herisetra, ny tsy fisian'ny asa ary ny tsy fitoviana ara-tsosialy. Ny tsy fahampian'ny fanadiovana fototra dia misy fiantraikany amin'ny tanàna rehetra.
Ny isam-ponina dia 100000 mponina tamin'ny taona 2014.
↑ Brazila ao amin'i geonames.org, novingiana ny 18/11/2018
Mbola ambangovangony amin'ny resaka Brazila ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_das_Ostras&oldid=966684"
Tanàna ao faritany mizaka-tenan'i Rio de Janeiro
Voaova farany tamin'ny 27 Febroary 2019 amin'ny 08:28 ity pejy ity.